PaOh Zawgyi Font Installer for Android
PaOh Zawgyi Font Installer
Rated 4.33/5 (3) — Free Android application by Myanmar Android Apps!
About PaOh Zawgyi Font Installer
Android ဖုန်းပေါ်မှာ ပအိုဝ်းစာကို ရေးသားအသုံးပြုလိုသူများအတွက် PaOh Zawgyi ကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
PaOh Zawgyi ဆိုသည်မှာ (ပအိုဝ်ၒ) ပအိုဝ်း ခမ်းကောင် နှင့် (ပအိုဝ်ꩺခမ်းဒမ်) ပအိုဝ်းခမ်းဒွမ် စာနှစ်မျိုးစလုံးကို ရေးနိုင်ဖတ်နိုင်ပါတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ 2012 နှစ်မှာလည်းထုတ်ပေးဖူးပါတယ်၊ အွန်းလိုင်းပေါ်မှာ Profile နာမည်သုံးမရလို့ ရေးလို့ရအောင်တောင်းဆိုထားသည့်အတိုင်း အသစ်အနေနဲ့ပြန်လည်ပြုပြင်ထုတ်ပေးပါတယ် Font အသစ်သုံးရင် ကီးဘုတ်အဟောင်းနဲ့သုံးလို့မရပါ အဟောင်းနဲ့မြင်ရမှာမဟုတ်ပါ။
ကီးဘုတ်ရော ဖောင့်ရောအခုအသစ်ထုတ်ထားတာကို အသုံးပြုရမှာပါ။
Smart Phone နှင့် ကွန်ပျူတာမှာ သုံးရင် ကောင်းကောင်းမွန်မွန်သုံးနိုင်ရန် လုပ်ပေးထားပါတယ်။
Samsung, Oppo ကဲ့သို့ Font Style ပါသောဖုန်းတွေမှာ Root မလိုအပ်ပဲအလွယ်တကူ Font Style ကနေပြောင်းပြီးအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
Vivo, Xiaomi(MIUI), Huawei(EMUI) ကဲ့သို့ Theme ပါသောဖုန်းတွေမှာလည်း
အခြားဖုန်းတွေမှာတော့ အသုံးပြုချင်ရင် Root ဖောက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
ပထမဦးစွာ App ကို Install လုပ်ပြီး ဖွင့်လိုက်ပါ။
ပြီးရင် ခမ်းကောင်၊ ခမ်းဒွမ် မိမိတို့အသုံးပြုချင်တာကို ရွေးချယ်နှိပ်လိုက်ပါ။
(Tutorial ကိုနှိပ်ပြီး အသုံးပြုနည်းကို ပုံနဲ့ကြည့်ရူ့နိုင်ပါတယ်။)
ကိုယ့်ဖုန်းအမျိုးအစားမပါရင်လည်း Other(#Root) ကိုနှိပ်ပြီး ဖုန်းအားလုံးကို ထည့်သွင်းလို့ရပါတယ်။
( သို့သော်ဖုန်းကို Root ဖောက်ထားရန်လိုအပ်ပါသည်။)
ပြီးရင် HiFont ထဲကိုရောက်သွားမှန်မယ် ဘယ်ဘက်အပေါ်ဒေါင့်က Menu ကိုခေါ်ပြီး My Font ကိုနှိပ်ပါ။
Custom Font ကိုထပ်နှိပ်ပါ။ Zawgyi PaOh Hi ဆိုတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
နှိပ်လိုက်ပါ။ Use ကိုထပ်နှိပ်ပါ။ ပြီးရင်အဲ့မှာပြောတဲ့အတိုင်းသာလိုက်လုပ်ပေးလိုက်ပါ။
စာရေးဖို့အတွက် PaOh Keyboard တွေကိုသွားဒေါင်းပြီးထည့်ပေးရပါမယ်။
ဒါက ခမ်းကောင်ပအိုဝ်းကီးဘုတ်ပါ။ >>
ဒါက ခမ်းဒွမ်ပအိုဝ်းကီးဘုတ်ပါ။ >>
Developed By Anonymous!!!
Credit > Anonymous
Download and install PaOh Zawgyi Font Installer version 1.0 on your Android device!
Android package: com.paoh.zawgyi, download PaOh Zawgyi Font Installer.apk
What are users saying about PaOh Zawgyi Font Installer
PaOh Kham Kaung Keyboard — Myanmar Android Apps!$2.39
Zawgyi Font Changer — MyominlattFree App